Neruzivo rwayo rwekuvandudza nekuchengetedza zvakatipoteredza, Shangke Chemical yakazvipira kuzadzisa basa rayo rehutano hwemagariro evanhu, pamwe nepfungwa ye "sainzi nehunyanzvi hwekuvandudza, kuchengetedza zvakasvibirira zvakasvibirira, yakatendeka uye yakavimbika, uye kukura kwakawanda", yakatemerwa kupa vatengi kumba nekune dzimwe nyika nemitengo inonzwisisika, zvigadzirwa zvemhando uye hunyanzvi hwekuita mabasa ehunyanzvi.
Vatengi veMuchke Chemical vakawedzera kusvika kuNorth America, Europe, India, uye isu tiri kugara tichiongorora uye tichishanda nesimba.
Makambani anoteedzera pfungwa ye "sainzi uye hunyanzvi hwekuvandudza, kuchengetedza zvakasvibirira zvakasvibirira, yakatendeka uye yakavimbika, uye yakajairika kukura", yakatsaurirwa kupa vatengi kumba nekune dzimwe nyika nemitengo inonzwisisika, zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye nehunyanzvi mabasa ehunyanzvi.
Iyo chigadzirwa inoshanda kwazvo uye ine yazvino yesainzi
uye budiriro yehunyanzvi.
Zvigadzirwa zvisingadhuri, kuderedzwa kwemitengo hakudonhedze basa.